Munamato kuna Santa Muerte webasa. ? Inoshanda mumaawa makumi maviri nemana!
Munamato kuna Santa Muerte webasa Iine simba kwazvo.
Izvo zvinoshanda zvakanyanya kana iwe uri kutsvaga basa sekunge izvo zvaunoda ndezvekugadzirisa imwe dambudziko iri kupihwa kwauri munzvimbo yako yebasa.
Simba risina kunaka iro isu tinonzwa, dzimwe nguva, munzvimbo yedu yebasa rakaipa uye rinogona kukanganisa vatinoshanda navo, maboss uye isu pachedu kana zvisina kunangana.
1 Munamato kuna Santa Muerte webasa
1.1 Rufu dzvene kune simba here?
1.2 Zvine ngozi here kutaura munamato uyu?
1.3 Ndirini pandinogona kunamatira munamato wekufa dzvene nebasa?
Wangu mudiwa uye mudiwa Rufu Rufu, ndinokukumbira iwe nemashoko aya nekuti ini ndinoda rubatsiro rwako.
Kubasa ndinozviwana ndichipfuura nematambudziko zvinondiita kuti ndive nechokwadi chekusingaperi kwangu.
Ndanga ndichiita zvekubira nekukara mapondo anoda kundiona pasi.
Ndiri kuenda munguva yakaipa iyo yandinoda kuti ichinje, ndinoda basa pasisina shanje, uko hunyanzvi hwangu hunoonekwa uye hunogona kumira kuti huve nani. Kupa mhuri yangu nyaradzo yavanoda.
Ndinokukumbira kuti uchengete basa rangu, uye kana zvikasaita. Ndibatsireiwo ndiwane iri nani. Ini ndinokumbira zuva randinofanira kuenda kubvunzurudzo.
Ndinoda kuzadzisa zvinangwa zvangu zvehunyanzvi kuti ndinzwe zvizere.
Ndiri kuda basa riri nani, muhoro uri nani, izvo chinangwa changu chehunyanzvi hachina muganho.
Ini ndinotsvaga kumira kuti ndive nani. Ndokusaka ndichiuya kwauri, runako rwako nesimba ndizvo infinito kuti ndinosiira matambudziko angu mumaoko ako. Ndatenda, ndinokutendai zvisingaite, ini ndiri mutendi akatendeka.
Uyu mutsara unoshandiswa panguva iyoyo patinoenda kubvunzurudzo yebasa, kana tave kuda kunyorera basa ratagara tichida, kubvunza izvo zvinotibatsira kuwana kukwidziridzwa kana kuwedzerwa muhoro yedu, kana uri kuenda munguva yakaoma munzvimbo yebasa uine mumwe wako, mukuru, mutengi kana mushandi.
Zvisinei, munamato uyu uchakubatsira iwe zvese zvine chekuita nenzvimbo yese yebasa.
Rufu dzvene kune simba here?
Yakave ichikudzwa kwazvo kwemakore mazhinji, kunyanya nevanhu veMexico.
Vatendi vari kuwedzera zvakanyanya uye izvi zvinongoratidza simba reRufu Rutsvene.
Kune avo vanofunga kuti iwo mweya wakaipa asi izvi zvizere zvisina zvigadziko patinoona mashura uye nerubatsiro rwakapihwa naSanta uyu kune wese munhu anofamba achienda kwaari kutsvaga nzira nekubatsirwa.
Zvine ngozi here kutaura munamato uyu?
Minamato Ivo pachavo havana njodzi.
Nekudaro, zvakanaka kuzviita nemutoro uzere nekuti nguva zhinji tinokumbira chimwe chinhu chisingaenderane nesu isu, shamwari kana nhengo yemhuri.
Minamato ichinhu chakaomarara nekuti tiri kupinda zana muzana remweya mune iro isu tinofanira kuziva mafambiro nekuti izvo zvisina kunaka zviri kuvandira mukutsvaga vasina simba mukutenda.
Ndirini pandinogona kunamatira munamato wekufa dzvene nebasa?
Panguva ipi neipi, munamato uyu unova chombo chedu chakavanzika nguva dzese zvisinei nekuti tiri kupi.
Vazhinji vanopa zano rekugadzira atari kana kugadzirira yenzvimbo yemunamato isati yasvika uye izvi zvinogona kutibatsira kutarisa pane zvatiri kuita.
Nekudaro, zvakakosha kuti tizive kuti kana tisina izvi zvakafanana, munamato unoshanda uye une simba nekuti unoitwa nekutenda kuti ndicho chinhu choga chatinofanira kuita nenzira yekumanikidza.
Yakasimba uye ine simba munyengetero kuna Santa Muerte zverudo zvisingaite
Minamato mina yeiyo yakasimba yeSaiprorian